စူပါတိုင်ဖွန်းအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်ကြတော့မည် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဖိလစ်ပိုင်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အနေဖြင့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ၏ အင်အား အဆင့်-၅ ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှု အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ပြီဟု ပြောနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဟောင်ကောင်၊ အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ် နှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ (၆) နိုင်ငံတို့မှ ဖြစ်လာနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းပုံဖေါ်တွက်ချက်မှုများ အရ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် လာမည့် ၃၆ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၅ မှ တဖြည်းဖြည်းအားပြန်လည်လျော့ကျလာပြီး အရှေ့ဘက်သို့ ကွေ့ကာ ဂျပန် Iwo Jima ကျွန်းအနီးမှဖြတ်ကျော်ချိန်တွင် CAT-1 အဆင့်အထိ လျော့သွားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။
အောက်ပုံတွင် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA လာမည့် ရက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ လာနိုင်မည့် အခြေအနေနှင့် ဦးတည်မည့် လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်အား TSR data များကို အခြေခံ ပုံဖေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကလစ်လုပ်၍ မူလ အရွယ်အစားကို ကြည့်ပါရန် 1000×518 px
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, super-typhoon, weather. 1 Comment »
One Response to “စူပါတိုင်ဖွန်းအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်ကြတော့မည်”
(၆) နိုင်ငံမိုးလေဝသ ဌာနများမှ ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားသော လမ်းကြောင်းများပြပုံ
« အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဖိလစ်ပိုင်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA အဆင့်-၅ မှ တဖြည်းဖြည်းအားလျော့ »